ပိုကောင်းတဲ့လုပ်ဆောင်ချက်မှတ်ဥာဏ်မရှိသလား။ (၂၀၁၂) - သင့် ဦး နှောက်သည် Porn တွင်ရှိသည်
အဘယ်သူမျှမ Porn, သာ. ကောင်း၏အလုပ်အဖွဲ့မှတ်ဉာဏ်? (2012)
အပ်ဒိတ်များ: အကွိမျမြားစှာလေ့လာမှုများဆင်းရဲတဲ့သိမြင်မှုရလဒ်များကိုမှ porn အသုံးပြုမှုလင့်ထားသည်။ ဒီ list ကိုကြည့်ပါ: ညစ်ညမ်းမှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျန်းမာရေးနှင့်ပိုမိုညံ့ဖျင်းသောသိမြင်မှုရလဒ်များနှင့်ချိတ်ဆက်ထားသည့်လေ့လာမှုများ။ ဆင်းရဲတဲ့အလုပ်အမှုဆောင် functioning (hypofrontality) သို့မဟုတ် porn အသုံးပြုသူများသည် / လိင်စွဲများတွင်ပြောင်းလဲ prefrontal လှုပ်ရှားမှုအစီရင်ခံလေ့လာရေး: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16။ (ဒီ 2019 meta-analysis ကိုလည်းကြည့်ပါ: ပြproblemနာများအင်တာနက်အသုံးပြုမှုအတွက်သိမြင်မှုဆိုင်ရာလိုအပ်ချက်: လေ့လာမှု ၄၀ ကို meta-analysis လုပ်တယ်.)
2021 - စွဲလမ်းမှုအမျိုးမျိုးတွင်ပြောင်းလဲထားသောအာရုံကြော - စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ“ ဖြစ်စဉ်များ” ကိုအကဲဖြတ်သည့်ညစ်ညမ်းလေ့လာမှုများအပေါ်ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်း - ၁- အာရုံစူးစိုက်မှုဘက်လိုက်မှု၊ https://sciencedirect.com/science/articlအီး / pii / S2352853221000080?% 3Dihub မှတဆင့် ရလဒ်များ - ၄ င်းတို့အားလုံးသည်မလိုမုန်းတီးသောညစ်ညမ်းသောသုံးစွဲသူများတွင်ပြောင်းလဲသွားသည်။
သုတေသနညစ်ညမ်းပုံရိပ်သိမြင် function ကိုလျော့နည်းစေတယ်လေတွေ့
အင်တာနက်ကညစ်ညမ်းစောစောဆယ်ကျော်သက်အရွယ် Boys ရဲ့ထိတွေ့: pubertal အချိန်ကိုက်အာရုံရှာနှင့်ပညာသင်နှစ်စွမ်းဆောင်ရည်ဖို့ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး (ကခြောက်လကာလအတွင်း) ဤရှားပါး longitudinal လေ့လာမှု porn အသုံးပြုမှုပညာသင်နှစ်စွမ်းဆောင်ရည်လျော့နည်းစေကြောင်းအကြံပြုထားသည်။
အခြားလေ့လာမှုမှာဂျာမန်သိပ္ပံပညာရှင်ကရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြ အင်တာနက်ကို erotica အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်လျော့နည်းနိုင်ပါတယ်. အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ် လုပ်ငန်းတစ်ခုပြီးမြောက်ရန် (သို့) စိန်ခေါ်မှုတစ်ခုကိုဖြေရှင်းရန်အတွက်၎င်းကိုအသုံးပြုနေစဉ်သတင်းအချက်အလက်များကိုစိတ်ထဲထားရှိခြင်းသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ သင်ဟာသင်္ချာဆိုင်ရာပြproblemနာတစ်ခုသို့မဟုတ်ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကိုဖတ်နေစဉ်စာလုံးများကိုတည့်တည့်ထိန်းထားခြင်းဖြင့်သတင်းအချက်အလက်အမျိုးမျိုးကိုထိန်းချုပ်နိုင်စွမ်းရှိသည်။ ၎င်းသည်သင်၏ရည်မှန်းချက်ကိုစိတ်ထဲထားရှိခြင်း၊ အာရုံပျံ့လွင့်ခြင်းများကိုခုခံတွန်းလှန်ခြင်းနှင့်ထကြွလွယ်သောရွေးချယ်မှုများကိုတားဆီးပေးသည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်သင်ယူခြင်းနှင့်စီစဉ်ခြင်းအတွက်အလွန်အရေးကြီးသည်။ တစ် ဦး ကတသမတ်တည်းသုတေသနတွေ့ရှိချက်စွဲ -related တွေကိုအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်နှောင့်နှေးသောကွောငျ့ဖွစျသညျ။ စိတ်ဝင်စားစရာမှာမှတ်ဉာဏ်တိုးတက်စေရန်တစ်လသင်တန်းတက်ခဲ့သောအရက်သမားများသည်အရက်စားသုံးမှုလျော့နည်းလာခြင်းနှင့်အလုပ်လုပ်သည့်မှတ်ဉာဏ်တွင်ရမှတ်များပိုများလာသည်။ တနည်းအားဖြင့်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်ကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခြင်းသည်ပုံရသည် ချင်တဲ့ဒေါသစိတ်နဲ့ထိန်းချုပ်အားကောင်းလာစေရန်.
ညစ်ညမ်းပုံရိပ်စမ်းသပ်မှုတွင်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူ ၂၈ ယောက်သည်ပုံရိပ် ၄ မျိုးကို အသုံးပြု၍ မှတ်ဉာဏ်အလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ခဲ့သည်။ တစ်ခုမှာ pornographic ဖြစ်သည်။ ပါဝင်သူများသည်လိင်စိတ်နှိုးဆွခြင်းနှင့်တစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းများနှင့် ပတ်သက်၍ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုတင်ဆက်မှုမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်တွင်လည်းပါ ၀ င်သည်။ ရလဒ်များအရညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကြည့်ရှုခြင်းတွင်အလုပ်လုပ်သည့်မှတ်ဉာဏ်သည်အဆိုးဆုံးဖြစ်ပြီး၊ (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသောသုတေသီများ၏ဆန်းစစ်ချက်ကိုပိုမိုကြည့်ပါ။ )
အထက်ပါလေ့လာမှုမှသာရေတိုရေရှည် erotica အသုံးပြုမှုများ၏သက်ရောက်မှုတိုင်းတာ။ သို့သော်စွဲအာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်ထပ်တလဲလဲအင်တာနက်စွဲအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်အတွက်တည်မြဲ memory နဲ့အာရုံစူးစိုက်မှုပြဿနာကိုထုတ်လုပ်ပြသခဲ့ကြသည်။
ညစ်ညမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ပြီးနောက်သုံးစွဲသူများမကြာခဏတွေ့မြင်ရသည့်အလျင်အမြန်တိုးတက်မှုများအပေါ် မူတည်၍ လူတစ် ဦး သည်ဆိုးကျိုးသက်ရောက်ရန်စွဲလမ်းစရာမလိုဟုထင်ရသည်။
သက်ဆိုင်ရာသုတေသနကိုမသုံးသပ်ခင်သုံးစွဲသူများအနေဖြင့်ညစ်ညမ်း Post-porn ပြောင်းလဲမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ဘာသတင်းပို့သည်ကိုသုံးသပ်ကြည့်ကြစို့။ (ဤတင်ပြချက်၏အဆုံးတွင်မိမိကိုယ်ကိုအစီရင်ခံစာများပိုမိုတွေ့ရှိနိုင်သည်။ ):
“ ဒါကဘာမှမဆိုင်ပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါစဉ်းစားလိုက်တာနဲ့စိတ်ကိုဖြတ်တောက်လိုက်တော့ အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်သည်အွန်လိုင်းကောလိပ်အတန်းများတွင်တက်ရောက်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဗဟုသုတကိုထိန်းသိမ်းရန်စွမ်းရည်သည်အကြိမ်ပေါင်းများစွာ ပိုမို၍ ကျွန်ုပ်သည် ပို၍ ကောင်းမွန်သောအာရုံစူးစိုက်မှုရှိနိုင်သည်။ ”
“ ပုံကြိုသတင်းအချက်အလက်ကို pre-reboot ထက်သိသိသာသာကောင်းအောင်ထိန်းထားနိုင်တာသတိထားမိတယ်။ ငါစာသားစာအုပ်ပါပုံကြမ်းတစ်ခုကိုကြည့်သောအခါငါထပ်မံကြည့်ရှုရန်မလိုအပ်ကြောင်းသဘောပေါက်လာသောအခါ၎င်းကိုမတော်တဆရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်သည်ပုံရိပ်ကိုကောင်းကောင်းမှတ်မိနေဆဲဖြစ်သည်။ မျက်နှာတွေကိုပိုကောင်းအောင်မှတ်မိနိုင်တယ်။ ”
“ အလုပ်မှာရော၊ အချိန်ပိုင်းစီးပွားရေးမှာပါအလုပ်တွေပိုလုပ်နိုင်တယ်။ ငါကြာကြာအာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ်။ "
“ ပြန်လည်ထူထောင်စဉ် [masturbation from porn to abst] - ကျွန်ုပ်သည်မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်မှုများပြားလာသည်။ ကျွန်ုပ်ဘဝ၌ပထမဆုံးအကြိမ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာဖွင့်ထားခြင်းခံရသည်ဟုခံစားရသည်။ ယခုတွင်ငါသည်တစ် atte ရှိသည်ntion span ။ ပြီးခဲ့တဲ့ ၁၀ နှစ်လုံးလုံးငါအာရုံစိုက်လို့မရဘူး၊ ဘာမှမမှတ်မိတော့ဘူးလို့ခံစားရတယ်။
“ [၆၈ နေ့] မင်းရဲ့ ဦး နှောက်ဟာပျောက်ကွယ်သွားပြီလို့ခံစားရတယ်။ ငါဒီကိုပြန်ဖွင့်တဲ့အခါ၊ ငါပခုံးပေါ်အလေးချိန်နဲ့တူတယ်လို့ခံစားခဲ့ရတဲ့အောက်ပါရောဂါလက္ခဏာတွေကိုစာရင်းပြုစုခဲ့တယ်။
ယနေ့ ဒီလက္ခဏာတွေထဲကတစ်ခုခုကိုငါမခံစားရတော့ဘူးဆိုတာကိုဒီမှာဖော်ပြရတာဂုဏ်ယူပါတယ်။ ကျွန်တော့်ခံစားချက်ကပိုပြီးတည်ငြိမ်နေတယ်။ လူများသည်သတိပြုမိလာကြသည်။ အဆိုပါစိုးရိမ်ပူပန်မှုပျောက်ကွယ်သွားသည်။ အကြှနျုပျ၏အာရုံစူးစိုက်မှုကြည်လင်ပြတ်သားစွာဖြစ်၏ ကျွန်တော့်ဘဝအတွက်လှုံ့ဆော်မှုကအရမ်းမြင့်တယ်။
တိုးတက်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်အများဆုံး Post-porn အကျိုးကျေးဇူးများကိုတို့သည်အနှံ့အပြားပြောဆိုနေကြတယ်, သူတို့စွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများကိုများ၏တဖန်ပြောင်းပြန်လှန်အားဖြင့်ရှင်းပြခဲ့နိုင်ပါသည်။ (အခြားမကြာခဏ highspeed porn တက်ပေးခြင်းပြီးနောက်အကျိုးကျေးဇူးများကိုအစီရင်ခံတင်ပြလူမှုရေးစိုးရိမ်စိတ်များနှင့်စိတ်ကျဝေဒနာ, တိုးတက်လာသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာစွမ်းဆောင်ရည်, အစစ်အမှန်အိမ်ထောင်ဖက်ပိုမိုဆွဲဆောင်မှု, လိင်-အကူအညီအထောက်အပံ့များအစားကလူအဖြစ်အလားအလာမိတ်ဖက်ကိုမြင်လျှင်, အဆိုပါနှစ်ထက်လည်းစောသောလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအရသာမှပြန်လာလျော့နည်းသွားကြသည်။ )
အာရုံကြောဆိုင်ရာသိပ္ပံပညာရှင်မကြာသေးမီကထိုကဲ့သို့သောလျော့နည်းသွားအဖြစ်သိမြင်မှုချို့ယွင်းမှုအတွက်အကောင့်နိုင်ကြောင်းစွဲ-related ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲအထီးကျန်ပါပြီ မီးခိုးရောင်ကိစ္စ ထဲမှာ တိုကျရိုကျ cortex နှင့်စနစ်တကျ အဖြူကိစ္စ။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ဦးနှောက်လေ့လာမှုများ အင်တာနက်ကိုစွဲထံမှခံရကွောငျးတငျပွ ချို့ယွင်း inhibitory ထိန်းချုပ်မှု နှင့် တိုးမြှင့် Impulse။ (အင်တာနက်ကိုစွဲလေ့လာမှုများအချို့ကိုဤအပိုင်းကိုမှာဆှေးနှေးစဉ်သတိပြုပါ ပါဝင် အွန်လိုင်း erotica အသုံးပြုမှု, အဘယ်သူမျှမက-မတူပဲခွဲထုတ်ဒီ post များ၏ဘာသာရပ်သောအလုပ်လုပ်နေမှတ်ဉာဏ်စမ်းသပ်ချက်။ )
အင်တာနက်ကိုစွဲအပေါ်ဦးနှောက်လေ့လာမှုများ တစ်တိုင်းတာ: ကိုလည်းအာရုံစူးစိုက်မှုအယှက်နိုင်သောအခြားပြောင်းလဲမှုထုတ်ဖေါ် dopamine အချက်ပြအတွင်းကျဆင်း။ Dopamine အာရုံစူးစိုက်မှု, အာရုံ, လှုံ့ဆျောမှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်ဖွဲ့စည်းခြင်းမှဗဟိုဖြစ်ပြီး, အနိမ့် dopamine အချက်ပြပြင်းပြင်းထန်ထန်နဲ့ဆက်စပ်နေပါတယ် ဆင်းရဲသောသူတို့သည်အလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ် (အရမ်းမျောက်) နှင့် ADHD.
သတိမထားမိခြင်း (အလှည့်အနေဖြင့်မှတ်ဉာဏ်အားနည်းခြင်း) သည်လှုံ့ဆော်မှုကင်းမဲ့ခြင်း (D2 dopamine receptors) ကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ အလုပ်များပျင်းစရာကောင်းသို့မဟုတ်စိတ်မဝင်စားပုံရသည်။ ဦး နှောက်၏ဆုလာဘ်ပတ် ၀ န်းကျင်တွင် dopamine အချက်ပြမှုလျော့နည်းလာခြင်းမှာထူးခြားချက်တစ်ခုဖြစ်သည် အားလုံး စှဲ.
သုတေသီများတိုင်းတာခြင်း dopamine သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး အင်တာနက်စွဲနှင့်အတူလူ said:
အတူတူခေါ်ဆောင်သွားဤရလဒ်များကို IAD [အင်တာနက်စွဲရောဂါ] အလေးအနက်ဦးနှောက်ပျက်စီးမှုနှင့် neuroimaging တွေ့ရှိချက်နောက်ထပ် IAD အဆိုပါ dopaminergic ဦးနှောက်စနစ်များအတွက်အလုပ်မဖြစ်နှင့်ဆက်စပ်နေသည်သရုပျဖျောစေခြင်းအလိုငှါအကြံပြုအပ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ကိုလည်း IAD သည်အခြားစွဲလမ်းမမှန်နှင့်အတူအလားတူ neurobiological မူမမှန်ဝေမျှစေခြင်းငှါ၎င်းပြောဆိုချက်ကိုထောက်ခံ။
မေးခွန်းလွှာ-based အင်တာနက်စွဲလေ့လာမှုများ (အကြောင်း, ဦးနှောက်ပုံရိပ်မပါဘဲလေ့လာမှုများသည်) ကိုလည်းတွေ့ပြီအလုပ်လုပ်မှတ်ဉာဏ်, ဆင်းရဲသောသတင်းအချက်အလက်အပြောင်းအလဲနဲ့လျော့နည်းသွားခြင်းနှင့် ချို့ယွင်းအလုပ်အမှုဆောင်ထိန်းချုပ်မှု။ သူတို့ရဲ့ရလဒ်များကိုလည်း ADD ၏ / ADHD တွေ့ရှိချက်နှင့်အတူတန်းစီခိုင်းတယ်။
သက်သေအထောက်အထား၏အထင်ရှားဆုံးနည်းနည်းလည်းနောက်တော်သို့လိုက်ရာတစျခုလေ့လာမှုကနေမဝင်စေခြင်းငှါ ပြန်လည်ထူထောင် အင်တာနက်ကိုစွဲ။ ဦးနှောက် Scan ဖတ်ဦးနှောက်အပြောင်းအလဲများနှင့်ပိုမိုကောင်းမွန်သိမြင် function ကို၏ပယ်ဖျက်ခံရပြသခဲ့သည်။ တဦးတည်းကဆိုပါတယ် သုတေသီများအုပ်စု:
ကုသမှုခံယူပြီးနောက်အုပ်စုအားလုံးတွင် [အင်တာနက်စွဲမှု] ရမှတ်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချလိုက်သည်။ တိုတောင်းသောမှတ်ဉာဏ်စွမ်းရည်နှင့်ရေတိုမှတ်ဉာဏ်၏သက်တမ်းသည်သိသိသာသာတိုးတက်လာခဲ့သည်။
တနည်းအားဖြင့်ဖြစ်ကောင်းတစ်ဦးထက်ပိုသောရေရှည်မဟာဗျူဟာအိမ်စာလုပ်နေစဉ်တွင်ရုံ porn tabs များပိတ်ပြီးထက်အဘို့အလို့ခေါ်ပါတယ်။
တစ်ဦးချင်းစီ porn အသုံးပြုသူများကအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစားသုံးမှုကာလအတွင်းသို့မဟုတ်ပြီးနောက်ပြဿနာများကိုသတင်းပို့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သုတေသီများထိုကဲ့သို့သောလျစ်လျူရှုထားသို့မဟုတ်မေ့တာဝန်များ, ချိန်းပျောက်ဆုံးနှင့်အိပ်စက်ခြင်းဆုံးရှုံး, အနုတ်လက္ခဏာအကျိုးဆက်များမှဦးဆောင်အဖြစ်အစိတ်အပိုင်းအတွက်လက်ရှိအလုပ်လုပ်-မှတ်ဉာဏ်လေ့လာမှုဒီဇိုင်းရေးဆွဲ။ အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များဟာသူတို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ကိုအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏အသုံးပြုမှုကိုထိန်းချုပ်ဆုံးရှုံးမှုမှပံ့ပိုးသည့်သိမြင်မှုယန္တယားညွှန်ပြအံ့သောငှါသတိပြုပါ:
[လိင်မှတ်ဉာဏ်] သည်ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်သို့ ဦး တည်သောအပြုအမူများ၏အရေးကြီးသောအချက်ဖြစ်သောကြောင့်အင်တာနက်လိင်ပါဝင်သူများ၏အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာကိုအင်တာနက်လိင်၌သူတို့ပါဝင်စဉ်ကာလအတွင်းလျှော့ချနိုင်သည်။ အကယ်၍ ဘာသာရပ်များသည်လိင်မှုဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုများနှင့်နောက်ဆက်တွဲလိင်မှုနှိုးဆွမှုများကိုအာရုံစူးစိုက်မှုသည်အမှုဆောင်လုပ်ငန်းဆောင်တာများနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းများကို ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်ပါက၎င်းတို့သည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အင်တာနက်အသုံးပြုမှုကိုစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်ခြင်းများပြုလုပ်နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
သုတေသီများကအလေးထားပြောကြားခဲ့ပြီး ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal porn ကြည့်နေစဉ် (စောင့်ကြည့်နေခဲ့ရသည်အချိန်နှင့်အမျိုးမျိုးသောသည်အခြားအချက်များမှဆန့်ကျင်ကဲ့သို့) အင်တာနက်ကိုလိင်ကနေပြဿနာများ၏ဒီဂရီ၏အဓိကခန့်မှန်းပါတယ်။ အဆိုပါသိပ္ပံပညာရှင်များစွဲ-related တွေကိုအားကောင်းအာရုံကိုဖမ်းယူမြင့်မားတဏှာနှင့် relapse တစ်ခုတိုးလာဖြစ်နိုင်ခြေဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြတော်မူသောအဘို့ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲနှင့်အတူမျဉ်းပြိုင်မှတ်ချက်ချသည်။ သူတို့က porn တုံ့ပြန် masturbate တစ်ဦးသည်ခိုင်ခံ့လိုအပ်ချက်အခြေခံမတရားသောရောင်ပြန်ဟပ်ခြင်းနှင့်စွဲလမ်း၏ရှေ့မှောက်တွင်အချက်ပြအံ့သောငှါတင်ပြသည်။
အတိုချုပ်ဆိုရလျှင်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုစွန့်ပစ်ပြီးနောက်အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်မှုများကိုသတိပြုမိသောညစ်ညမ်းသူများသည်ထိုတိုးတက်မှုကိုစိတ်ကူးမထားပါ။ အထောက်အထားများအရတိုးတက်မှုသည် ဦး နှောက်တွင်စွဲလမ်းမှုနှင့်ဆက်နွယ်သောပြောင်းလဲမှုများကိုပြောင်းပြန်အဖြစ်သို့ရောက်စေသည်။
သင်တစ်ဦးရယ်လိုတယ်ဆိုရင်: ငါ IQ ကိုနှစ်ဆတိုးခဲ့တဲ့ (Dilbert ရဲ့ဖန်တီးသူ)
“ ငါက ၁၃ ရက်လောက်ရှိမယ်ထင်တယ်။ ငါအရမ်းအာရုံစူးစိုက်ခံစားရပြီးပုံမှန်ထက်ပိုကောင်းအာရုံစူးစိုက်နိုင်ပါတယ်။ လူတွေနဲ့စကားပြောတဲ့အခါငါမျက်လုံးချင်းဆုံတယ်။ ကျွန်ုပ်၏အသံသည်ပိုမိုနက်ရှိုင်းပြီး ပို၍ စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုနှင့် ပို၍ ရှင်းလင်းသောအသံများထင်သည်။
“ ငါ (အင်တာနက်ညစ်ညမ်းမှုကိုသုံးတဲ့) အချိန်မှာဒီ ဦး နှောက်မြူတာ (သို့) ဆာလောင်မွတ်သိပ်မှုလိုခံစားမှုမျိုးကိုခံစားခဲ့ရတယ်။ အဲဒါကငါ့ကိုအာရုံစူးစိုက်ဖို့၊ လူတွေကိုစကားပြောဖို့၊ ငါ့ရဲ့နေ့စဉ်အလုပ်တွေကိုလုပ်ဖို့ခက်ခဲစေခဲ့တယ်။ ၇-၁၀ ရက်ကြာပြီးနောက်ဒီခံစားချက်ပျောက်သွားတယ်။ ကျွန်တော့်စိတ်ကရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိလာတယ်၊ အတွေးတွေကအလွယ်တကူထိန်းချုပ်နိုင်ခဲ့တယ်။
"ကျွန်မရဲ့မှတ်ဉာဏ်တိုးတက်လာ ငါအရမ်းရှင်းလင်းပြတ်သားစွာအိပ်မက်ရှိသည်။ စကားလက်ဆုံပြောဆိုရန်လွယ်ကူသည်။ တဖန်ငါဆာလောင်မွတ်သိပ်ခံစားရတယ် (တင်စားမှုများကိုစကားပြော) ။ "
ငါ porn, တစ်ကိုယ်ရည်အာသာဖြေခြင်းနှင့်အော်ဂဇင်ကိုကြည့်ပြီးနောက်9ရက်ဖြစ်ခဲ့သည်။ ငါ့အတွက် pmo မရှိဘူး ငါ့ ဦး ခေါင်းကဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတာငါမယုံနိုင်ဘူး။ ကျွန်တော့်အကြံအစည်များ၏အစွန်အဖျားတွင်အမြဲရှိခဲ့သောဤအဖြူရောင်ဆူညံသံ၊ https://www.reddit.com/r/NoFap / မှတ်ချက်များ / 5myg1d / 9_days_my_mental_health_has_dramatically_improved /
အသက် ၂၆ - စိတ်နည်းပြီးရှက်တတ်၊ စိုးရိမ်ခြင်း၊ စွမ်းအင်နှင့်လှုံ့ဆော်မှုများခြင်း၊ ဦး နှောက်မှေးမှိန်ခြင်း၊ ADHD သည်ပိုမိုကောင်းမွန်သည်
“ အခုငါပိုပြီးထိန်းချုပ်မှုနဲ့အေးဆေးတည်ငြိမ်မှုကိုခံစားရတယ်။ (ငါ့ရဲ့ငွေကြေးပြproblemsနာတွေစသဖြင့်) အခြေအနေတွေကငါ့အတွက်တကယ်ကောင်းနေပြီ။ ကျိုးကြောင်းဆီလျော်စွာတွေးတောဆင်ခြင်နိုင်စွမ်းနှင့်တွေးခေါ်နိုင်စွမ်းသည်မြူခြင်းမရှိဘဲကြီးထွားလာသည်။
“ ကျွန်တော်က ၁၄ ရက်ပဲရှိသေးတယ်။ ကျွန်တော်သတိပြုမိသောအကျိုးကျေးဇူးများမှာအာရုံစူးစိုက်မှုနှင့်အာရုံစူးစိုက်မှုကိုများစွာတိုးပွားစေသည်။
ပိုကောင်းသိမှတ်ခံစားမှု- ကျွန်ုပ်၏မှတ်တမ်းတွင်4c အထိရောက်ပြီးစာဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောစိတ်မရှိသဖြင့်ငါသည်ညစ်ညမ်းမှုသည်ကျွန်ုပ်၏ ဦး နှောက်အပေါ်မည်မျှသက်ရောက်မှုရှိသည်ကိုပင်မသိခဲ့ပါ၊ အထူးသဖြင့်နည်းပညာအထူးကျွမ်းကျင်သူတစ်ယောက်နဲ့ကောလိပ်ကသိပ်ပြီးမလွယ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်ရသင့်တာထက်ငါပိုရုန်းကန်ခဲ့ရတယ်။ သို့သော်အခက်ခဲဆုံး (နောက်ဆုံးစာသင်၊ ၇ တန်း) ဖြစ်သော်လည်းဤနွေနွေ ဦး ရာသီ nofap သို့ ၀ င်ရောက်ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးစွမ်းဆောင်ရည်ကိုရရှိခဲ့ပြီး As and B + s အားလုံးနှင့်အတူဌာန၏စာရင်းထဲသို့ပြန်လည်ရောက်ရှိခဲ့သည်။ ကျွန်တော့်စိတ်ကပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်အရာရာကိုပထမဆုံးအကြိမ်အလုပ်မလုပ်လျှင်ပင်စဉ်း စား၍ လှုံ့ဆော်ခံရနိုင်သည်။ ငါရုန်းကန်ကျောင်းသားဖြစ်ခြင်းမှလူတိုင်းနှင့်ပူးပေါင်းလိုသူကိုသွားခဲ့တယ်။ အိုးနဲ့ငါပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကဘွဲ့ရ! 100 နေ့ရက်များ !!!!
“ အရူးပဲ။ ဒါပေမယ့်ငါနေ့တိုင်း PMO လုပ်တဲ့အချိန်မှာ၊ ငါ့စာရင်းကိုင်အတန်းတွေအတွက်စာရင်းကိုင်ပြdoingနာတွေကတကယ်ကိုခက်ခဲလိမ့်မယ်၊ ငါဒီမှာ (ငါ့အရှည်ဆုံးငါ၏နောက်ဆုံးအရှည်) အနည်းငယ်သာ Streak တည်ဆောက်ခြင်းစတင်ခဲ့ပြီးနှင့်အမျှဒါဟာငါ့အလူတန်းစားတာဝန်ကျလုပ်ဖို့ကောင်းသောခံစားရသည်။ ငါသူတို့ကိုလုပ်ဖို့ဖိအားခံစားရ, အချိန်ဆွဲနေတဲ့ပြင်းထန်သောခံစားချက်ရှိပါတယ်, ငါ့ကိုစတင်ရန်တွန်းအားပေး။ ငါစတင်ရန်မဖိအားခံစားခဲ့ရမီ။ ငါသူတို့အပေါ်မှာအလုပ်လုပ်သောအခါငါစိတ်သက်သာရာရစတင်, ငါတာဝန်ကျတဲ့နေရာပြီးသွားတဲ့အခါကြီးမြတ်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ ငါဘာမှမခံစားရမယ်လို့မတိုင်မီသော်လည်း, ငါတာဝန်တစ်ခုပြီးမြောက်လျှင်, အောင်မြင်မှုမရှိအသိ, ထုံခြင်းဖြစ်သည်။ "
“ ကျွန်တော်ခံစားခဲ့ရသောကောင်းကျိုးအချို့ - ကျွန်ုပ်သည်ပိုမိုပေါင်းသင်းနိုင်ခြင်း၊ သတင်းအချက်အလက်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်စွာသိမ်းဆည်းခြင်းနှင့်မှတ်မိခြင်းခံရနိုင်သည်။ ငါ့အတိတ်ဘဝမှာဖြစ်ပျက်ခဲ့တာတွေကိုအများကြီးပိုမှတ်မိတယ်။ ငါစိတ်တိုလို့မရဘူး၊ အလုပ်တွေအများကြီးပိုလုပ်နိုင်တယ်။ ”
နောက်ထပ်တကယ့်ကိုထူးခြားတဲ့ပြောင်းလဲမှုတစ်ခုကတော့အိပ်မက်အကြိမ်ရေဒါမှမဟုတ်အိပ်မက်မှတ်မိမှုပဲ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံလွှာကိုစွန့်ခွာပြီးကတည်းကအရင်ကထက်ပိုပြီးအိပ်မက်မက်ခဲ့တယ်။ အဲဒါဘာလဲဆိုတာမသိဘူး ငါ့ ဦး နှောက်ကညစ်ညမ်းရုပ်ပုံကိုအိပ်ရာမ ၀ င်ခင်အိပ်မက်မက်ဖို့ဒါမှမဟုတ်တစ်ခုခုအတွက်စွမ်းအားမရှိဘူး။
"၁၄ ရက် - သူမနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီအသေးစိတ်အချက်အလက်တွေကိုကျွန်တော်ဘယ်လိုမှတ်မိသလဲဆိုတာအံ့သြမိပါတယ်။ အရင်တုန်းကမိန်းကလေး Boob တွေကိုကြည့်နေတုန်းပဲ။ သူတို့မမှန်ဘူးဆိုရင်ငါစိတ်မဝင်စားဘူး"
ငါနှစ်ပေါင်း adderall သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်။ ငါကောင်းမွန်သောလမ်းပေါ်ရှိစဉ်ကကျွန်ုပ်စိတ်နှင့်ရည်မှန်းချက်များသည်“ သဘာဝ” adderall တစ်ခုပေါ်တွင်ရှိနေသည်ကိုသတိပြုမိသည်။ ဒါကဖြစ်ပျက်လာပေမယ့်ငါလှုံ့ဆော်မှုခံစားရတယ်, ငါသတင်းအချက်အလက်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်, ငါသာမန်အလုပ်အတွက်ပိုမိုမြင့်မားသည်းခံစိတ်တီထွင်ခဲ့သည်။ ဒီ subreddit ကိုဖတ်ပြီးတဲ့လူတွေဟာ nofap လုပ်နေတဲ့ adderall ကိုလူအများစုကရုန်းထွက်ခဲ့ကြပြီးငါ့ရဲ့အလားတူအခွင့်အရေးရဖို့ငါအရမ်းစိတ်လှုပ်ရှားခဲ့တယ်။ ”
ငါဟာဒုတိယအဆင့်အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်ပြီးအာရုံစူးစိုက်မှုအပြည့်နဲ့ပထမတန်းစားတစ်ယောက်အနေနဲ့အတန်းမှာအချိန်တော်တော်များများရခဲ့ပြီးငါ့တာ ၀ န်တွေအတွက်စိတ်အားထက်သန်စွာနေထိုင်နိုင်ခဲ့တယ်။
ငါ PMO ကို ၁၃ နှစ်မှာစခဲ့တုန်းကငါဟာကျောင်းသားကောင်းတစ်ယောက်ပါ။ ကျွန်တော့်အသက်က ၁၆ နှစ်ဖြစ်ပြီး၊ ဂရုမစိုက်တော့ဘူး။ ငါအတန်းပျက်ကွက်ခဲ့သည်နှင့်အနိုင်နိုင်ကအဲဒီမှာထဲကဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ကျွန်ုပ်သည်ကောလိပ်တက်ပြီးကောင်းမွန်သောစာမေးပွဲရမှတ်များပြားနေဆဲ၊ အသက် ၂၀ တွင် PMO နှင့်ပြtroubleနာရှိနေသေးသည်။
ငါနဲ့အတူရှိနေတဲ့မိန်းကလေးတစ်ယောက်နဲ့အော်ဂဇင်ပြုဖို့အခက်တွေ့နေတယ် အခုကျွန်မမှာရည်းစားရှိနေပြီးပြtheနာကိုစောစောစီးစီးသိနိုင်တယ်။ ဒါကြောင့်ငါတို့နှစ် ဦး စလုံးသည်ဤအရာများမှဖြစ်ပေါ်လာသောဆိုးကျိုးများကိုပြောင်းပြန်ဖြစ်ရန်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ညစ်ညမ်းစာပေများကိုမကြည့်ရှုရန်အချိန်အတန်ကြာသဘောတူခဲ့သည်။
ယနေ့ကျွန်ုပ်သည်နေ့ ၁၆ ရက်ရောက်နေပြီဖြစ်ရာလွန်ခဲ့သော ၇ နှစ်တာကာလအတွင်းကျွန်ုပ်မည်မျှမိုက်မဲကြောင်းထံမှရူးသွပ်နေသည့်အချက်တစ်ချက်ကိုထိမိသွားသည်။ အရာရာသည်ယခုအတန်းထဲတွင်မည်မျှရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှိနေသည်ကိုအံ့သြစရာဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ဟောပြောချက်များမှပြtheနာများအားလုံးကိုလွယ်လွယ်ကူကူဖြေရှင်းနိုင်သည်ဟုခံစားမိသည်။ ငါ့ကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့တခြားအရာတွေကိုသုတေသနလုပ်ဖို့ငါ့ရဲ့အားသာချက်ကိုလေ့လာဖို့အချိန်ပိုယူဖို့အချိန်အများကြီးရှိတယ်။ ငါအသက်ကြီးလာပြီး porn နှင့်မကြာခဏလာသည်နှင့်အမျှကျွန်ုပ်၏စိတ်ဓာတ်သည်အဓိကပြproblemနာဖြစ်လာသည်။ ယခုတွင်ငါသည်ကမ္ဘာကြီးကိုကမ်းလှမ်းထားသည်များကို ပို၍ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်နေရသည်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ Fog အင်ဂျင်နီယာတစ်ဦးကနေလာမယ့်
ငါကအခြားအရာများလုပ်နိုင်တယ် ငါကတခြားအရာတွေခံစားရတယ် ကျွန်ုပ်သည်အခြားအရာများကိုလိုချင်သည်။ ကျွန်ုပ်၏နောက်ပြင်ဆင်မှုကိုအမြဲတမ်းရှာဖွေနေတော့မည်မဟုတ်ပါ။ ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများသည်တစ်ချိန်ကကျွန်ုပ်အပေါ်လွှမ်းမိုးခဲ့သောစွမ်းအားမရှိသကဲ့သို့ကျွန်ုပ်သည်တနေ့လုံးတပ်မက်သောဘောလုံးလည်းမဟုတ်ပါ။ ငါနောက်ဆုံးတော့လိင်အပြင်တခြားအရာတွေကိုစဉ်းစားဖို့အာရုံစူးစိုက်ထားတဲ့စိတ်တစ်ခုရတော့တယ်။ ”
နောက်ထပ်ရလဒ်တစ်ခု - ကျွန်ုပ်၏အရေးအသားသည်ပိုမိုကောင်းမွန်လာသည်။ ငါလက်ရေးကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပါဘူး (ဒါပေမယ့်ပိုကောင်းလာတယ်) ငါဆိုလိုတာကစကားလုံးရွေးချယ်မှု၊ ဝါကျတည်ဆောက်ပုံစတာတွေဖြစ်တယ်။ ပထမဘွဲ့ကျောင်းပထမနှစ် ((ငါအခုပြီးခါစ) အတွင်းမှာအရေးအသားဟာတကယ့်ကိုစိတ်ရှုပ်စရာပါ။ အခုတော့ညစ်ညမ်းတဲ့ရုပ်ပုံကိုကြည့်ပြီးတဲ့အခါကျေနပ်စရာပါပဲ။ လွယ်ကူပြီးအခမဲ့ဖြစ်သည်။ ငါ့မှတ်ဉာဏ်ယေဘုယျအားဖြင့်တိုးတက်လာလို့ဖြစ်နိုင်တယ်။
90 ရက်ပေါင်း: လျော့နည်းစိုးရိမ်စိတ် -Improved မှတ်ဉာဏ်ဆုံးမသောနှင့်ငါ့ရည်းစား -More မှနျကွောငျးဝနျခံသော -Better တရားသဖြင့်စီရင်အတူ -Increased လိင် drive ကိုအာရုံစူးစိုက် -More -Much ။
“ [၆ ပတ်] ကျွန်ုပ်၏အာရုံစူးစိုက်မှု၊ အားထုတ်မှု၊ အသေးစိတ်အာရုံစိုက်မှု၊ မှတ်ဉာဏ်၊ မှတ်မိမှုနှင့်လူမှုရေးစွမ်းရည်များတိုးတက်လာခဲ့သည်။ "
“ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်အနည်းငယ်တုန်းကငါ porn ကိုစသုံးတဲ့အချိန်လောက်မှာမှတ်ဉာဏ်ကမြူလာတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးကျွန်တော့်ဘဝတစ်သက်တာလုံးခွဲခြားမရခဲ့ဘူး။ ယခုလအနည်းငယ်ပြန်လည်နာလန်ထူလာပြီးအတိတ်ကအမှတ်တရများသည်ကျွန်ုပ်ထံရောက်ရှိလာပြီ။ အစပိုင်းမှာတော့သူတို့ဟာသိပ်ပျော်ဖို့ကောင်းပြီးဂရုမစိုက်ကြလို့သူတို့တောင်မှဖြစ်ခဲ့တာကိုမယုံဘူး။ နောက်ဆုံးတော့၊ ဒီဟာကိုဒီလောက်ကြာအောင်စိတ်ပျက်ပြီးတဲ့နောက်၊ ငါဟာဒီဘ ၀ ဟာဒီဘ ၀ ပဲ၊ အဲဒီပျော်ရွှင်ဖွယ်အမှတ်တရတွေကတကယ်ပဲ။ ကျွန်ုပ်၏အတိတ်ဘ ၀ နှင့်လုပ်ရပ်များနှင့်ဆက်စပ်မှုရှိရန်ကြိုးစားနေသည်။ အခုငါ့အတိတ်ကငါ့ဆီပြန်ပျံလာပြီ၊ ဒါ့အပြင်အိပ်မက်မက်။ လွန်ခဲ့တဲ့လအနည်းငယ်ကဖြစ်ခဲ့တဲ့အိပ်မက်တွေတောင်ငါ့ဆီပြန်လာနေတယ်။ ဒါကလည်းအတော်လေးပျော်စရာကောင်းတယ်။ ”
“ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်သတိပြုမိသည်က [ညစ်ညမ်းသောရုပ်ပုံ] မှကြဉ်ရှောင်ခြင်းသည်ကျွန်ုပ်၏မှတ်ဉာဏ်ကိုသိသိသာသာတိုးတက်စေခဲ့သည်။ စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းသည်မှာကျွန်ုပ်သည်ယခုအချိန်အထိပင်မသိသေးသောအရာသည်ကျွန်ုပ်သည်အော်ဂဇင်မခံစားရသောကြောင့်ကျွန်ုပ်၏သကြားဓာတ်သည်ပိုမိုတည်ငြိမ်မှုရှိသည်။ ဦး နှောက်ထဲတွင်မှတ်ဉာဏ်နှင့်မြင့်မားသောဂလူးကို့စ်အကြားဆက်စပ်မှုရှိသည်။ ညစ်ညမ်းမှုကိုတစ်ကိုယ်တည်းရာဂစိတ်ဖြေခြင်းမရှိသည့် အချိန်မှစ၍ ၎င်းသည်မည်မျှတည်ငြိမ်ကြောင်းစဉ်းစားမိသည်။ dopamine သည် ဦး နှောက်သကြားကိုမည်သို့လုပ်ဆောင်သည်ကိုအကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။
"သုံးပတ် - ငါ့မှတ်ဉာဏ်အများကြီးပိုကောင်းသည်။ ငါ၌ရှိသကဲ့သို့ငါကဲ့သို့သော ဦး နှောက် - fart အချိန်လေးရှိသည်မဟုတ်။ အခုတော့အရာရာတိုင်းဟာလွယ်လွယ်လေးနဲ့လာနိုင်တယ်။ ဒါကကောင်းတယ်။ ”
ကျွန်ုပ်၏ Semester GPA သည်ကျွန်ုပ်၏ fapping ပုံစံများနှင့်တိုက်ရိုက်ဆက်စပ်နေပါသည်။ PMO အမြောက်အများ = အတန်းထဲ၌အိပ်ပျော်ခြင်းနှင့်ခုန်ကျော်ခြင်းများဖြစ်သည်။ ပြuntilနာကိုယခုတိုင်အောင်နားလည်သဘောပေါက်ခြင်းမရှိချေ
“ ငါမှာအရင်ကထက်စွမ်းအင်ပိုများတယ်၊ ငရဲလိုဟော်တယ်ဒါပေမယ့်ငါထိန်းချုပ်နိုင်တယ်။ ကျွန်တော့်မှတ်ဥာဏ်ကပိုကောင်းလာပြီ ထိုအခါငါတစ်ချိန်ကငါ့၌နထေိုငျသောလူမှုရေးကောင်လေး, ရရှိပါသည်။ ငါဟာငါ့ရဲ့စွဲဆောင်မှုကိုပြန်လည်ရရှိခဲ့တယ်။ ဒီစွဲလမ်းမှုကိုငါတွန်းလှန်ခဲ့ရတဲ့အိပ်မောကျတဲ့ညတိုင်းနဲ့စိတ်ပျက်စရာမိနစ်တိုင်းမှာကျိုးနပ်ပါတယ်။ ”” [ရက်ပေါင်း ၉၀ အစီရင်ခံစာ] ရှင်းလင်းသောစိတ်။ အဲဒီသုံးလအတွင်းငါ့ဘဝမှာပိုပြီးရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိခဲ့ဘူး။ fapping နှင့်ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကင်းမဲ့ခြင်းကသင့်အားသင်၏ဘ ၀ အကြောင်းကိုစဉ်းစားရန်နှင့်အရာရာကိုရှုမြင်ရန်အချိန်များစွာပေးသည်။ ”
ဒါကြောင့်ဒီနေ့ငါမေးခွန်း ၁၀၀ (သင်္ချာ ၇-၁၂ ဆရာအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်) ကိုယူပြီးအဲဒါဟာငါ့ဘ ၀ ရဲ့အခက်ခဲဆုံးစမ်းသပ်မှုမဟုတ်ပေမယ့်အရာအားလုံးကြောင့်ထိပ်ဆုံး ၅ ဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ အဲဒါက (၄.၅ နာရီ) ကုန်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါကောင်းကောင်းလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးစိုးရိမ်စိတ်မရှိဘဲတစ်ချိန်လုံးအာရုံစူးစိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။ ဤသည်မှာခဲယဉ်းသောလေ့လာမှုမျိုးမရှိပဲ (ယခုလက်ရှိသင်္ချာကျူရှင်ဖြစ်သည်။
ဒီ NoFap မပါဘဲဖြစ်နိုင်သမျှပါပြီမယ်လို့ဘယ်သူမျှမကလမ်း။ ကောလိပ်၌ငါကောင်းသောအဆင့်ကိုဖန်ဆင်းတစ်ခုတည်းသောနည်းလမ်းစမ်းသပ်အပေါ်လိမ့်မယ်လို့ကျနော်သေချာများအတွက်သိကြှမျးသောပစ္စည်းများအတွက် overstudying အနားမှာရှိ၏။ Day 28 - ပိုကောင်းတဲ့အာရုံကိုပြတဲ့အထောက်အထား
“ ငါသတိထားမိတာကတော့စိုးရိမ်စိတ်လျော့နည်းသွားခြင်း၊ စိတ်အပြောင်းအလဲလျော့နည်းလာခြင်း၊ လူမှုရေးပိုမိုယုံကြည်စိတ်ချရခြင်း၊ မိန်းကလေးများနှင့်ပတ်သက်လာလျှင် ပို၍ ရှက်စရာကောင်းခြင်း၊ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်အောင်တိုက်တွန်းခြင်း၊ ပိုမိုကောင်းမွန်သောအာရုံစူးစိုက်မှု၊ ချောချောမွေ့မွေ့စကားပြောခြင်း၊ ကောင်းသောပြက်လုံးများ၊ ။ " “ (နေ့ ၁၅) - အကောင်းမြင်သဘောထား
- နေ့စဉ်လုပ်ငန်းများကိုလုပ်ဆောင်ရန်လှုံ့ဆော်မှု (နှင့်ပိုမိုမြန်ဆန်စွာလုပ်ဆောင်ရန်)
- တာ ၀ န်ယူမှုများနှင့်တာ ၀ န်များကိုလက်ခံလိုသည်
- ရှင်းလင်းသော ဦး ခေါင်း
- အခြားသူများနှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုရာတွင်ပိုမိုပစ္စုပ္ပန် / ဂရုပြုပါ
- ပိုမိုမြန်ဆန်သောဉာဏ်ပညာ၊ အရာအားလုံးကိုပိုမိုရယ်စရာကောင်းသော
“ မှတ်ဉာဏ်ကအမြဲတမ်းကောင်းတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုအမိုးပေါ်ကနေဖြတ်ပစ်လိုက်တယ်။ ငါ ၁၅ ယောက်ရှိတဲ့အခန်းထဲ ၀ င်ပြီး ၅ မိနစ်အောက်မှာသူတို့ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်အားလုံးကိုမှတ်မိနိုင်အောင်သင်ယူနိုင်တယ်။ GPA ၄။ လူမှုရေးစိုးရိမ်ပူပန်မှုနှင့် BS အပျက်သဘောအတွေးအခေါ် - အမှိုက်ပုံးအပြင်ထွက်သည်။
ကြောငျးမှာသူတို့ရဲ့သင်္ချာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့်ဆက်စပ်သောအိမ်မှာကျောင်းသားများအတွက် '' ကွန်ပျူတာအသုံးပြုခြင်းကိုလား?
အထူးသဖြင့်ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာ၊ လှုပ်ရှားမှု (သို့) ညစ်ညမ်းရုပ်ပုံများကိုကြည့်ခြင်းသည်ကျောင်းသားများ၏သင်္ချာဆိုင်ရာအရည်အချင်းနှင့်သိသိသာသာဆိုးကျိုးသက်ရောက်နေပြီးရုပ်မြင်သံကြားမှသတင်းများကိုကြည့်ခြင်းသည်ကျောင်းသားများ၏စွမ်းဆောင်ရည်ရမှတ်များနှင့်မပတ်သက်ပါ။
လေ့လာမှုအလုပ်အဖွဲ့မှတ်ဉာဏ် Prefrontal Cortex ပြီးတော့ Dopamine အားဖြင့် Driven သည်ဖော်ပြပေး